ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံကြီး (၅) ခုက ဘာတွေလဲ
26 Feb 2018 . 2:18 PM
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်အင်အားကို တွက်ချက်တဲ့အခါမှာ စစ်သားအရေအတွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပုံသေထားလို့ မရပါဘူး။ စစ်သားအရေအတွက်ထက် တခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စစ်အင်အားတွက်ချက်တဲ့အခါ စစ်သားအရေအတွက်ဟာ (၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အရေးပါပြီး တင့်ကားအရေအတွက်ဟာ (၁ဝ) ရာခိုင်နှုန်း၊ တိုက်လေယာဉ်အရေအတွက်ဟာ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း၊ စစ်လေယာဉ်ဟာ (၂ဝ) ရာခိုင်နှုန်း၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအရေအတွက်ဟာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရေငုတ်သင်္ဘောဟာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းအထိ အရေးပါပါတယ်။ ကဲ . . . ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲကမှ စစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ (၅)ခုအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စစ်အသုံးစရိတ် = ၃၅ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၆၆.၈ သန်း
စစ်သားအရေအတွက် = ၃၈၇,၆၃၅ ယောက်
တိုက်လေယာဉ် = ၂၉၆ စီး
တင့်ကား = ၄ဝ၆ စီး
စစ်လေယာဉ် = ၁,၃ဝ၅ စီး
ရေတပ်ဖွဲ့ = ၁၁၈ စီး (လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၄စီး)
စစ်အသုံးစရိတ် = ၅၁ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၁၂၆၆.၈ သန်း
စစ်သားအရေအတွက် = ၄,၂ဝ၇,၂၅ဝ ယောက်
တိုက်လေယာဉ် = ၆၇၆ စီး
တင့်ကား = ၄,၄၂၆ စီး
စစ်လေယာဉ် = ၂,၁ဝ၂ စီး
ရေတပ်ဖွဲ့ = ၂၉၅ စီး (လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၃စီး)
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စစ်အသုံးစရိတ်ဟာ ၅၁ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် စစ်အသုံးစရိတ်ဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလွန်းပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့စတုတ္ထမြောက် စစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီထက်ပိုကြီးမားလာမယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။
စစ်အသုံးစရိတ် = ၁၆၁.၇ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၁၃၇၃.၅ သန်း
စစ်သားအရေအတွက် = ၃,၇၁၂,၅ဝဝ ယောက်
တိုက်လေယာဉ် = ၁,၂၇၁ စီး
တင့်ကား = ၆,၄၅၇ စီး
စစ်လေယာဉ် = ၂,၉၅၅ စီး
ရေတပ်ဖွဲ့ = ၇၁၄ စီး (လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၁စီး)
လူဦးရေ ၁၃၇၃.၅ သန်းရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ စစ်သည်အရေအတွက် ၃.၇ သန်းကျော်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့စစ်သည်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အင်အားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပံ မယုံနိုင်လောက်စရာကောင်းအောင် တိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တင့်ကားအရေအတွက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံထက် များတာဆိုလို့ ရုရှားနိုင်ငံပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။
စစ်အသုံးစရိတ် = ၄၄.၆ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၁၄၂.၃ သန်း
စစ်သားအရေအတွက် = ၃,၃၇၁,ဝ၂၇ ယောက်
တိုက်လေယာဉ် = ၈ဝ၆ စီး
တင့်ကား = ၂ဝ,၂၁၆ စီး
စစ်လေယာဉ် = ၃,၇၉၄ စီး
ရေတပ်ဖွဲ့ = ၃၅၂ စီး (လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၁စီး)
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားဟာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မလိုပါဘူး။ ရုရှားနိုင်ငံဟာ တင့်ကားအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ရုရှားနိုင်ငံဟာ ၂ဝဝ၈ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်အသုံးစရိတ်ကို သုံးဆလောက်ပိုသုံးခဲ့တာပါ။ နောက်သုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်အသုံးစရိတ်ဟာ လက်ရှိထက် (၄၄) ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
စစ်အသုံးစရိတ် = ၅၈၇.၈ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၃၂၃.၉ သန်း
စစ်သားအရေအတွက် = ၂,၃၆၃,၆၇၅ ယောက်
တိုက်လေယာဉ် = ၂,၂၉၆ စီး
တင့်ကား = ၅,၈၈၄ စီး
စစ်လေယာဉ် = ၁၃,၇၆၂ စီး
ရေတပ်ဖွဲ့ = ၄၁၅ စီး (လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၁၉ စီး)
အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေထက် စစ်အသုံးစရိတ်ကို ပိုသုံးတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်သုံးစရိတ်အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်အင်အားကို တွက်ချက်တဲ့ Global Firepower ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူဦးရေ ၅၆.၈ သန်းရှိပြီး စစ်သည်ပေါင်း ၅၁၆,ဝဝဝ ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ (၁၃၃) နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ဟာ (၃၁) ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်လေယာဉ်ပေါင်း (၂၄၉) ခုရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပြီး တင့်ကား (၅၉၂) ခုရှိတယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စစ်အင်အားနဲ့ မတိုင်းတာပါဘူး။ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးမြင့်မားမှသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်မှာပါ။ စစ်အသုံးစရိတ်ကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးထက် ပိုသုံးနေသရွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှုလွဲမှားနေသေးတယ်လို့သာ ဆိုချင်ပါတယ်။
ကမ်ဘာ့စဈအငျအားအကွီးဆုံး နိုငျငံကွီး (၅) ခုက ဘာတှလေဲ
ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှရေဲ့စဈအငျအားကို တှကျခကျြတဲ့အခါမှာ စဈသားအရအေတှကျတဈခုတညျးကိုပဲ ပုံသထေားလို့ မရပါဘူး။ စဈသားအရအေတှကျထကျ တခွားအရေးကွီးတဲ့အရာတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။ စဈအငျအားတှကျခကျြတဲ့အခါ စဈသားအရအေတှကျဟာ (၅) ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ အရေးပါပွီး တငျ့ကားအရအေတှကျဟာ (၁ဝ) ရာခိုငျနှုနျး၊ တိုကျလယောဉျအရအေတှကျဟာ (၁၅) ရာခိုငျနှုနျး၊ စဈလယောဉျဟာ (၂ဝ) ရာခိုငျနှုနျး၊ လယောဉျတငျသင်ျဘောအရအေတှကျဟာ (၂၅) ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ရငေုတျသင်ျဘောဟာ (၂၅) ရာခိုငျနှုနျးအထိ အရေးပါပါတယျ။ ကဲ . . . ကမ်ဘာနိုငျငံတှထေဲကမှ စဈအငျအားအကွီးဆုံးနိုငျငံ (၅)ခုအကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
စဈအသုံးစရိတျ = ၃၅ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၆၆.၈ သနျး
စဈသားအရအေတှကျ = ၃၈၇,၆၃၅ ယောကျ
တိုကျလယောဉျ = ၂၉၆ စီး
တငျ့ကား = ၄ဝ၆ စီး
စဈလယောဉျ = ၁,၃ဝ၅ စီး
ရတေပျဖှဲ့ = ၁၁၈ စီး (လယောဉျတငျသင်ျဘော ၄စီး)
စဈအသုံးစရိတျ = ၅၁ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၁၂၆၆.၈ သနျး
စဈသားအရအေတှကျ = ၄,၂ဝ၇,၂၅ဝ ယောကျ
တိုကျလယောဉျ = ၆၇၆ စီး
တငျ့ကား = ၄,၄၂၆ စီး
စဈလယောဉျ = ၂,၁ဝ၂ စီး
ရတေပျဖှဲ့ = ၂၉၅ စီး (လယောဉျတငျသင်ျဘော ၃စီး)
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့စဈအသုံးစရိတျဟာ ၅၁ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယျ။ ဆငျးရဲတဲ့နိုငျငံဖွဈပမေယျ့ စဈအသုံးစရိတျဟာ ကွောကျမကျဖှယျ ကောငျးလှနျးပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာ့စတုတ်ထမွောကျ စဈအငျအားအကွီးဆုံးနိုငျငံဖွဈနပေါပွီ။ ဒီထကျပိုကွီးမားလာမယျလို့ သုံးသပျရပါတယျ။
စဈအသုံးစရိတျ = ၁၆၁.၇ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၁၃၇၃.၅ သနျး
စဈသားအရအေတှကျ = ၃,၇၁၂,၅ဝဝ ယောကျ
တိုကျလယောဉျ = ၁,၂၇၁ စီး
တငျ့ကား = ၆,၄၅၇ စီး
စဈလယောဉျ = ၂,၉၅၅ စီး
ရတေပျဖှဲ့ = ၇၁၄ စီး (လယောဉျတငျသင်ျဘော ၁စီး)
လူဦးရေ ၁၃၇၃.၅ သနျးရှိတဲ့ တရုတျနိုငျငံဟာ စဈသညျအရအေတှကျ ၃.၇ သနျးကြျောရှိပွီး ကမ်ဘာ့စဈသညျအမြားဆုံးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။ တကယျတော့ တရုတျနိုငျငံရဲ့စဈတပျအငျအားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာစုနှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာပံ မယုံနိုငျလောကျစရာကောငျးအောငျ တိုးတကျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ တငျ့ကားအရအေတှကျဟာ တရုတျနိုငျငံထကျ မြားတာဆိုလို့ ရုရှားနိုငျငံပဲရှိပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့မို့ တရုတျနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ တတိယစဈအငျအားအကွီးဆုံးနိုငျငံဖွဈနတောပါ။
စဈအသုံးစရိတျ = ၄၄.၆ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၁၄၂.၃ သနျး
စဈသားအရအေတှကျ = ၃,၃၇၁,ဝ၂၇ ယောကျ
တိုကျလယောဉျ = ၈ဝ၆ စီး
တငျ့ကား = ၂ဝ,၂၁၆ စီး
စဈလယောဉျ = ၃,၇၉၄ စီး
ရတေပျဖှဲ့ = ၃၅၂ စီး (လယောဉျတငျသင်ျဘော ၁စီး)
ရုရှားနိုငျငံရဲ့စဈအငျအားဟာ ကမ်ဘာ့ဒုတိယအငျအားအကွီးဆုံးနိုငျငံဖွဈတယျဆိုတာ မေးခှနျးထုတျစရာ မလိုပါဘူး။ ရုရှားနိုငျငံဟာ တငျ့ကားအမြားဆုံးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ ရုရှားနိုငျငံဟာ ၂ဝဝ၈ခုနှဈကတညျးက စဈတပျအသုံးစရိတျကို သုံးဆလောကျပိုသုံးခဲ့တာပါ။ နောကျသုံးနှဈကွာတဲ့အခါ ရုရှားနိုငျငံရဲ့စဈအသုံးစရိတျဟာ လကျရှိထကျ (၄၄) ရာခိုငျနှုနျးပိုမြားလာမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
စဈအသုံးစရိတျ = ၅၈၇.၈ ဘီလီယံ
လူဦးရေ = ၃၂၃.၉ သနျး
စဈသားအရအေတှကျ = ၂,၃၆၃,၆၇၅ ယောကျ
တိုကျလယောဉျ = ၂,၂၉၆ စီး
တငျ့ကား = ၅,၈၈၄ စီး
စဈလယောဉျ = ၁၃,၇၆၂ စီး
ရတေပျဖှဲ့ = ၄၁၅ စီး (လယောဉျတငျသင်ျဘော ၁၉ စီး)
အမရေိကနျနိုငျငံဟာ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအသုံးစရိတျတှထေကျ စဈအသုံးစရိတျကို ပိုသုံးတတျပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ စဈသုံးစရိတျအမွငျ့ဆုံးနိုငျငံလညျး ဖွဈနပေါတယျ။
ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှရေဲ့ စဈအငျအားကို တှကျခကျြတဲ့ Global Firepower ဝကျဘျဆိုကျရဲ့အဆိုအရ မွနျမာနိုငျငံဟာ လူဦးရေ ၅၆.၈ သနျးရှိပွီး စဈသညျပေါငျး ၅၁၆,ဝဝဝ ရှိတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဝကျဘျဆိုကျမှာ မှတျတမျးတငျထားတဲ့ (၁၃၃) နိုငျငံမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အဆငျ့ဟာ (၃၁) ဖွဈပါတယျ။ စဈလယောဉျပေါငျး (၂၄၉) ခုရှိတယျလို့ ဖျောပွထားပွီး တငျ့ကား (၅၉၂) ခုရှိတယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။
တကယျတမျးတော့ နိုငျငံတဈနိုငျငံရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို စဈအငျအားနဲ့ မတိုငျးတာပါဘူး။ ပညာရေးနဲ့ ကနျြးမာရေးမွငျ့မားမှသာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျတဲ့ တိုငျးပွညျဖွဈမှာပါ။ စဈအသုံးစရိတျကို ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေးထကျ ပိုသုံးနသေရှေ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုလှဲမှားနသေေးတယျလို့သာ ဆိုခငျြပါတယျ။